Fitiavan-kely sy tsy fitsinjovana ny fianaran’ny taranaka fara aman-dimby! Boky fampianarana vaovao efa niasa roa taona, izay tsy azo amidy mihitsy no efa misy mivarotra lafo sahady eny amin’ny tsenam-boky eny Ambohijatovo. Ireo boky fampianarana am-polony eo anivon’ny Sekoly ambaratonga fototra tokony hozaraina maimaim-poana amin’ny mpianatra no misy manaparitaka eny an-tsena.
Amidin’ireo mpivarotra 20 000 ariary ny boky fandaharam-pampianarana ambaratonga fototra, ny sasany indray ataon’izy ireo 7 000 ariary. Na ny masonkarena nanontana an’ireo boky ireo aza anefa tsy antsasaky ny sanda ivarotan’ireo mpivarotra azy akory. Fiaraha-miasan’ ny mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena sy ny mini- siteran’ny Fanabeazana no nahafahana nanontana sy tokony hizarana maimaim-poana an’ireo boky ireo. Sady mety hanimba ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny fampiroboroboana ny fana- beazana izao toe-javatra izao, no tsy hahatrarana ny tanjona amin’ny fahazoan’ ireo ankizy ny boky tokony ho tonga eny am-pelantanany ihany koa.
Endrika hosoka mihitsy no ataon’ireo mpamatsy sy mpivarotra an’ireo bokim-pampianarana ireo, satria kikisan’ireo mpivarotra ny soratra « Tsy azo amidy » eo amin’ny pejy voalohan’ireo boky ka misy tokoa ny voafitaka mividy izany. «Misy olona manatitra ety ireny boky ireny ka izahay no mividy azy. Ao ihany koa ireo manakalo amin’ny boky hafa eto aminay dia izahay indray no mivarotra azy», hoy ny fanazavan’ny mpivarotra iray etsy Ambohijatovo.
Maro ny karazana boky fianarana tsy azo amidy no hita eny amin’ny tsenam-boky etsy Ambohijatovo. Etsy an-kilany anefa, nilaza ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa mahavoasazy ny fivarotana ny boky fianarana izay voarara ny fivarotana azy. Ahiana ho mpampianatra ihany no mety mamoaka ireny boky ireny eny an-tsena, araka ny fanazavana voaray.
«Izay tratra mivarotra sy manaparitaka ny boky dia hampiakarina filankevitry ny fitsipi-pifehezana na «Codis». Miankina amin’ny lalàna sy sazy sahaza azy eo no hampiharina aminy. Raha mpampianatra dia mety hoesorina amin’ny asany izy. Valo volana lasa izay dia nisy tratra teny Antaninarenina ka efa niakatra Codis», hoy Andriamampandry Todisoa, tale jeneraly eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Maimaika sy tsy natao haharitra ela ny fanovàna endrika an’Antananarivo